Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Staffan Herrström as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Sweden to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Staffan Herrström as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Sweden to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Staffan Herrström as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Sweden to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Staffan Herrström was born on 28 January 1955 in Strangnas, Sweden. He passed High School in 1973 at Uppsala. In 1980, he receivedaBachelor’s Degree in Arts (Russian, Eastern European Studies, and Political Science) from the University of Uppsala. He served as the Secretary of the Swedish Liberal and Radical Youth in Uppsala from 1973 to 1975 and as the Secretary General of the Swedish Liberal and Radical Youth from 1976 to 1978. He also served asapolitical adviser to Deputy Prime Minister Ola Ullsten from 1981 to 1982, an editorial journalist for the Goteborgs-Posten from 1983 to 1986, and the Head of Office of the Parliament Group for the Liberal Party from 1986 to 1991. Afterwards, he served as the State Secretary at the Prime Minister’s Office from 1991 to 1994, Director of the Department for Europe, and Deputy Director General and acting Director-General of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) from 1995 to 2004. Then, he served as the Director of the Department of Policy and Methodology and Deputy Director-General of Sida from 2004 to 2007. Since 2007, he has been serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Sweden to Tanzania, Vietnam and Poland. He is married, and has two daughters.
မစ္စတာ စတက်ဖန် ဟားရ်စထရွမ်း အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ဆွီဒင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ စတက်ဖန် ဟားရ်စထရွမ်းကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတန်းနက်စ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဥစလာမြို့မှ အထက်တန်းကျောင်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ဥစလာတက္ကသိုလ်မှ ရုရှား၊ အရှေ့ဥရောပ လေ့လာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး သိပ္ပံဘာသာရပ်တို့ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ် အထိ ဥစလာမြို့၊ ဆွီဒင်လစ်ဘရယ်နှင့် ရယ်ဒီကယ် လူငယ်များအဖွဲ့တွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ဆွီဒင်လစ်ဘရယ်နှင့် ရယ်ဒီကယ် လူငယ်များအဖွဲ့တွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အထိ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် အိုလာအူလ်စတန်၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ ဂေါ်တီဗို့ ပိုစတန် သတင်းစာတိုက်တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ လစ်ဘရယ်ပါတီ၏ ပါလီမန်အဖွဲ့ရုံးတွင် ဌာနအကြီးအကဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ အတွင်းဝန်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ဥရောပဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဆွီဒင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ခေတ္တ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ မူဝါဒရေးရာဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ဆွီဒင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ပိုလန်နိုင်ငံတို့တွင် ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ စတက်ဖန် ဟားရ်စထရွမ်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ပြီး သမီး(၂)ဦး ရှိပါသည်။